Ny lasa, ankehitriny ary ny hoavin'ny tontolon'ny marketing influencer | Martech Zone
Ny folo taona lasa dia iray amin'ny fitomboana goavana ho an'ny marketing influencer, mametraka izany ho paikady tsy maintsy ananana ho an'ny marika amin'ny ezaka ataon'izy ireo hifandray amin'ireo mpihaino azy. Ary ny fiangaviany dia haharitra satria maro ireo marika mitady hiara-miasa amin'ny influencers mba hanehoana ny maha-azo itokiana azy.
Miaraka amin'ny fisondrotry ny e-varotra ara-tsosialy, ny famerenana ny fandaniana amin'ny dokam-barotra ho an'ny marketing influencer avy amin'ny fahitalavitra sy ny haino aman-jery ivelan'ny aterineto, ary ny fampitomboana ny fampiasana rindrambaiko manakana doka izay manakana ny doka an-tserasera nentim-paharazana, dia tsy mahagaga izany:
Ny marketing influencer dia antenaina hamokatra $22.2 lavitrisa eran'izao tontolo izao amin'ny 2025, niakatra $13.8 lavitrisa tamin'ny taon-dasa.
Na izany aza, misy ny fanamby ao anatin'ny marketing influencer satria miova tsy tapaka ny tontolony, ka sarotra ho an'ny marika, ary na dia ny influencers mihitsy aza, ny manaraka ny fanao tsara indrindra. Izany no mahatonga izao fotoana tsara indrindra hiverenana amin'ny zavatra nandaitra, inona no tsy nisy, ary ahoana ny hoavin'ny fampielezan-kevitra mahomby.
Ny ho avy dia Nano
Raha tombanana hoe iza no nanao onja tamin'ny taon-dasa, dia nanafintohina ny tsy mpivarotra sy ny mpivarotra ny zava-misy. Tamin'ity taona ity, tsy dia niraharaha anarana lehibe toa an'i The Rock sy Selena Gomez izao tontolo izao - nifantoka tamin'ny micro-influencers sy nano-influencers izy ireo.
Ireo influencers ireo, izay misy mpanaraka eo anelanelan'ny 1,000 sy 20,000, dia afaka manatratra ireo vondrom-piarahamonina niche, izay ho fantsona tsara indrindra ho an'ny marika hahatratra ny ampahany manokana amin'ny mpihaino azy. Tsy vitan'ny hoe afaka mifandray amin'ny vondrona tsy miraharaha ny varotra nentim-paharazana izy ireo, fa ny tahan'ny firotsahany (ERs) dia ambony kokoa. Tamin'ny taona 2021, nanana salan'isa ny nano-influencers ER amin'ny 4.6%, avo telo heny noho ny an'ny influencers manana mpanaraka mihoatra ny 20,000.
Ny herin'ny micro-influencers sy ny nano-influencers dia tsy afa-nandositra tamin'ny mpivarotra ary rehefa mikasa ny hanatsara ny paikadin'izy ireo amin'ny haino aman-jery sosialy ny marika ary hampiasa ny ER avo lenta amin'ny fampielezan-kevitra mitohy, dia ho hitantsika fa mahazo laza bebe kokoa ireo tiers influencer ireo.
Mitohy mihamatotra ny indostrian'ny marketing influence
Mahagaga ihany koa, ny angon-drakitra dia naneho fa ny salan-taonan'ny mpampiasa media sosialy dia nitombo tamin'ny taon-dasa.
Niakatra 25% ny isan-jaton'ny mpampiasa ao amin'ny Instagram eo anelanelan'ny 34 sy 4 taona, raha nidina 13% kosa ny isan'ny mpampiasa TikTok 17 ka hatramin'ny 2 taona.
Mpampiasa TikTok eo anelanelan'ny 18 sy 24 taona no isan'ny vondrona mpampiasa be indrindra amin'ny sehatra, amin'ny 39% amin'ny mpampiasa rehetra.
Mandritra izany fotoana izany, 70% amin'ireo mpampiasa YouTube dia eo anelanelan'ny 18 sy 34 taona.
Hita taratra teo amin'ireo mpanaraka azy ny fihetsehan'ny mpihaino matotra miatrika ny zava-misy. Raha nanohy nirohotra tao amin'ny Instagram ho an'i Beyonce sy ny Kardashians ny mpampiasa, ny fikarohana dia mampiseho fa ny Finance & Economics, Health & Medicine, ary Business & Careers no sokajy nahasarika indrindra. mpanaraka vaovao in 2021.
Ny fitomboan'ny fananganana, ny fanavaozana ary ny Metaverse dia hitondra ny varotra influencer mankany amin'ny ambaratonga manaraka
Ny indostrian'ny marketing influencer tamin'ny taona 2022 dia be pitsiny lavitra noho ny talohan'ny areti-mifindra, ary nahatsikaritra ireo mpandray anjara. Influencers izao dia ampahany lehibe amin'ny ankamaroan'ny bokin'ny mpivarotra, fa tsy ho an'ny tetikasa tokana izay mahazatra roa taona lasa izay. Ny marika dia mitady fiaraha-miasa mitohy amin'ireo influencers.
Mandritra izany fotoana izany, ny sehatra media sosialy dia manome fitaovana vaovao ho an'ny mpamorona sy fomba maro kokoa hahazoana fidiram-bola. Tamin'ny taona 2021, nanampy fivarotana mpamorona, rafitra fifanarahana fampiroboroboana vaovao ary fanatsarana ny tsenan'ny influencer ny Instagram mba hanampiana ireo marika hifandray amin'ireo mpampiasa. Namoaka fanomezana virtoaly sy horonan-tsary i TikTok, ary koa ny fahaiza-miaina mivantana. Ary ny YouTube dia namoaka ny Fonds Shorts $ 100 tapitrisa ho fomba iray hanentanana ny mpikatroka hamorona votoaty ho an'ny valin-teniny amin'ny TikTok.
Farany, ny fivarotana an-tserasera dia niaina fitomboan'ny meteorika nandritra ny areti-mifindra, saingy…
Ny varotra sosialy dia antenaina hitombo avo telo heny haingana, ho $ 1.2 trillion amin'ny 2025
Nahoana ny Fiantsenana no napetraka ho amin'ny Revolisiona ara-tsosialy, Accenture
Ny sehatra media sosialy dia mamoaka fampidirana e-varotra, toy ny Instagram's Drops ary Ny fiaraha-miasa amin'i TikTok amin'ny Shopify, mba hanamora sy hanararaotra izany rivo-doza izany.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nanaporofo ireo mpikatroka media sosialy ho loharano sarobidy, tsy azo ihodivirana mitarika amin'ny fivoarana izay mamela ny indostria ho tsara toerana amin'izay ho avy. fa inona no ho avy dia azo inoana fa ny fitomboana sy ny fandraisana ny augmented reality sy ny metaverse.
Ny fandraisana ny marketing influencer avy amin'ny lafiny roa ka hatramin'ny telo no fotoana lehibe manaraka, araka ny asehon'ny fiovan'ny paikady Facebook hifantoka amin'ny zavatra rehetra Meta. Aza diso hevitra fa hitondra fanamby maro koa izany. Ny fananganana sy fizarana traikefa mampientam-po dia midika filaharana fianarana lehibe ho an'ireo mpikatroka virtoaly. Saingy raha jerena ny fomba nahatongavan'ny indostria tamin'ny areti-mifindra sy ny hery be dia be, dia matoky izahay fa ireo mpitaona dia miatrika izany fanamby izany.
Ampidino ny tatitry ny US State of Influencer Marketing 2022 HypeAuditor
Tags: Accenturetahan'ny fifanakalozanahypeauditortraikefa immersivemarketing marketingindostrian'ny marketing influencertontolon'ny marketing influencerstatistika momba ny marketing influencerstatistikan'ny marketing influencerInstagraminstagram nilatsakaMetametaversemicro-influencernano-influencerselena gomezshopifyvarotra sosialyhaino aman-jery sosialyrevolisiona sosialyny vatolampyTikTokYouTube